Halka loo isticmaalo qaybaha caaga ah
Qaybaha caaga ah waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo qaabaynta qaabab kale oo wax lagu farsameeyo, kuwaas oo cabirkooda iyo shaqadoodu ay buuxinayaan shuruudaha naqshadayaasha. In kabadan 80% ee qaybaha balaastigga ah waxaa lagu shubay mideynta cirbadeynta, taas oo ah habka ugu weyn ee lagu helo qaybo balaastig ah oo sax ah. Duro ...Akhri wax dheeraad ah »
10 nooc oo cusbi caag ah iyo dalab
Si aad ugu fiicnaato qaabeynta iyo soo saarista alaabada caagga ah, waa inaan fahanno noocyada iyo isticmaalka balaastigga. Caaggu waa nooc ka mid ah isku-jirka molecule sare (macrolecules) kaas oo lagu polymerized by isku-darka polymerization ama falcelinta polycondensation la monomer sida wax cayriin. Waxaa jira qaraabo badan ...Akhri wax dheeraad ah »
Sanduuqa Caafimaadka ee Caaga ah (sidoo kale loo yaqaan sanduuqa dawada) ama sanaadiiqda caafimaad ee balaastigga ah, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa isbitaalada iyo qoysaska. Tan waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo dawooyinka, qalabka caafimaadka ama loo qaado si loo arko bukaanka. Sanduuqa caafimaadka, sida magiciisa ka muuqata, waa weel loogu talagalay keydinta dhexdhexaadka ...Akhri wax dheeraad ah »
Iyada oo la horumarinayo warshadaha casriga ah, waxaa jira waxyaabo caag ah oo aad u fiican. Isla mar ahaantaana, badeecooyinka balaastigga ah ayaa sidoo kale si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan. Gaar ahaan, qaybo balaastik ah oo sax ah ayaa la isticmaalaa. Hadda aan kula wadaagno talooyinka qaybaha caagagga saxda ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida loo doorto soo saaraha caaryada irbaddaada
Caaryada duritaanka ayaa ah nooc ka mid ah qalabka sameynta balaastigga ama qeybaha qalabka. Qaab dhismeedka caaryada la isku duro waa sax oo isku murugsan, waana inuu leeyahay nolol adeeg sare oo dhawr boqol oo kun oo wareeg oo wareeg ah ah Waa nooc ka mid ah qalabka qiimaha sare leh, oo tayadiisu waxay ...Akhri wax dheeraad ah »